अभिषेक बिना बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी करिश्मा आखिर किन बन्न सकिन्न बच्चन परिवारको बुहारी ? थाहा पाउनुहोस् । | Rochak
July 3, 2021 NepstokLeaveaComment on अभिषेक बिना बाच्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेकी करिश्मा आखिर किन बन्न सकिन्न बच्चन परिवारको बुहारी ? थाहा पाउनुहोस् ।
बलिउडकी कुनै समयकी चर्चीत अभि’नेत्री हुन् करिश्मा कपुर । उनको जन्म सन् १९७४ २५ जुनमा भएको थियो । कपुर खानदानमा महिलाहरुले फिल्ममा अ’भिनय गरेको इति’हास रहेको थिएन ।
तर, यो परम्परा करिश्माले तोडिन् । तर, सुरुवाती दिनमा उनलाई खासै सफलता मिल्न सकेन । तर, संघष गर्दै गर्दा उनले सफल’ताको उचाई हात पार्न सफल भइन् । करिश्माको निक’नेम लोलो हो ।
उनले डेब्य गरेको फिल्म प्रेम कैदी हो । बबी देवलसँग उन’लाई डेब्यु गराउने कुरा चले पनि बबीको फिल्म निकै पछि रिलिज हुने भएपछि उनले प्रेम कैदी फिल्म’मा अ’भिनय गरेकी थिइन् । जब उ’नको डेब्यु भयो तब उनको लुक्स’लाई लिएर धेरै नै मजाक उडाइयो । उन’लाई लेडी रणधीर कपुर भनिन्थ्यो ।
तर, जति नै आलो’चित भए पनि उन’लाई लिएर फिल्म नि’र्माण गर्ने निर्माताहरुको लाइन लागेको थियो । सन् १९९२ मा उनको ६ वटा फिल्म रिलिज भएको थियो । करिश्मा’को दोस्रो फिल्म पुलि’स अफिसर रहेको थियो ।
उक्त फिल्ममा ज्याकी श्राफ नाय’कको भुमिका रहेका थिए । उनकै अंकल ऋषि कपुरले ज्या’की उनको अंकल झै देखिएको बताए’का थिए ।सन् १९९४ मा आएको फिल्म राजा बाबुमा करिश्मा’ र गोविन्दाको भुमिका धेरैले मन’पराए । उनले
त्य’सपछि सलमान खान, अक्षय कुमार, आमिर खान, शाहरुख खान, सन्नी देवल, अजय देवगनसँग काम गरिन् ।
करिश्माको धेरै अभिनेता’सँग अफयेरको हल्ला’ पनि चलेको थियो । तर, उनले यसबारे केही बो’लिनन् ।
सन् २००२ मा उनको विवाह अभिषेक बच्चनसँग हुने लगभग पक्का भएको थियो । तर, विवाह आटेको केही दिनमा नै इनगेजमेन्ट टुटेको थियो । मिडि’या रिपोर्टका अनुसार अभिषेकसँग करिश्माकी ‘आमाले कति कमा’उँछौँ भनेर प्रश्न गरेपछि बच्चन परिवार रिसाएको थियो ।
अन्ततः विवाह हुने ला’गेको सम्बन्ध पनि टुट्यो । सन् २००३ मा उनको विवाह उद्योगपछि संजय कपु’रसँग भए’को थियो । उनको दुई सन्तान पनि भए । तर, सम्बन्ध लामो समय टिक्न सकेन । सन् २०१६ मा उनीहरुले डि’भोर्स गरे । केटीएम दैनिक बाट